Waxaa soo kordhay dhaawacyada halista ee baaskiilada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Tomas Oneborg/Scanpix
Waxaa soo kordhay dhaawacyada halista ee baaskiilada
La daabacay tisdag 9 juli 2013 kl 11.48
Waqtiyadii waxaa toban jibbaarmay dadka dhaawacyada halista ah ku gala baaskiilada marka la barbardhigo tirakoobyo hadda ka hor la soo bandhigay.
Tirakoob ay soo saartay Hay’adda badbaadada bulshada iyo heeganka (MSB) waxaa lagu muujiyey in ay sannad walba 3500 oo qof uu dhaawac halis ahi ka soo gaaro shil baaskiilo. Dadkaas oo dhaawacyadaas awgood isbitaalada lala jiifiyo waqti ka badan afar iyo labaatan saac. Tirakoob oo horay loo sameeyey oo boliiska laga helay wuxuu muujinayaa in ay sannadkiiba shilalka baaskiilada dhaawacyo halis ah ka soo gaari jireen dad tiradoodu dhan tahay ilaa 300 oo qof. Balse dhanka kale waxaa la sheegay in uusan tirakoobkaan cusubi ahayn toban meelood oo meel tirada laga helay diiwaanka dukaanka ee Hay’adda gargaarka bulshada.
Jan Schyllander oo baare ka ah hay’adda MSB wuxuu sheegay in la ogaa in tirakoobkii uu ahaa mid aan aad loogu kalsoonaan karin, laakiin ay la yaab leedahay in loo isticmaalayey tirakoobka rasmiga. Taasina waxay saameyn ku yeelatay jiheynta hawlaha ammaanka waddooyinka:
- Waxaan run ahaantii sababnay in aan sawir qaldan ka bixinno shilalka baaskiilada. Dhibaatooyinkaasna waxaa ka mid ahaa sidii ay shilalkaasi u badanayeen iyo baaxaddooda. saameyn weyn ayeyna run ahaantii u leedahay qaybaha dalka in shilalkaas baaskiilada la dhayalsado.
Sannad walba waxaa shilal baaskiil awgood daryeel dhaawacyo isbitaalada u aada dad gaaraya 23 000 oo qof. Dadka dhaawacyada ugu badani soo gaaraana waxay u badan yihiin dad dhallin yar oo da’doodu u dhexeyso 14 iyo 20 sano. Laakiin in shil baaskiil lagu dhinto waxay la soo badaneysaa da’da oo sii kordheysa.
Isha: TT/ MSB